Sawirro: Ciidamadii ugu faraha badnaa oo Caawa lasoo dhoobay waddooyinka Muqdisho | Entertainment and News Site
Home » News » xogwaran » Sawirro: Ciidamadii ugu faraha badnaa oo Caawa lasoo dhoobay waddooyinka Muqdisho
Sawirro: Ciidamadii ugu faraha badnaa oo Caawa lasoo dhoobay waddooyinka Muqdisho
daajis.com:- Waxaa la adkeeyay guud ahaan amaanka Magaalada Muqdisho ee Caasimada Somalia, iyadoo inta badan laamiyada iyo waddooyinka magaalada lasoo dhigay ciidamo aad u gaashaman oo baaraya Gaadiidka iyo dadka shacabka ah.
Ciidamada oo aad u farabadan ayaa waxaa badi la dhigay Isgosyada Magaalada Muqdisho iyo Xarumaha Muhiimka ah ee Muqdisho, waxaana sidoo kale barbar socda Gaadiid dagaal oo gaaf wareegaya waddooyinka kuwaa oo sheeda kala soconaaya ciidamada howlgalka wada.
Ciidamo kale oo ka tirsan isla ciidamadaani ayaa howlgal Guri guri iyo mid gaari baarisba kawada Xaafadaha Magaalada Muqdisho.
Adkeynta amniga iyo Howlgalada socda ayaa ka danbeysay kadib markii Hay’adaha amaanka ay heleen xogo muujineysa in maleeshiyaadka Al-shabaab ay maagan yihiin weeraro ay ka geystaan magaalada Muqdisho, maadaama Bisha Soon ay tahay 17, kuna beegan tahay dagaalkii Beder.
Sidoo kale, waxaa magaalada laga dareemayaa ciriiri dhanka gaadiidka ah, maadaama gaadiidka saf dheer la gelinaayo oo la baarayo, taasi oo keenaysa in gaadiidka ay iska daba yimaadaan.